Dacwadii Loo Haystay Kornayl Tuke Oo La Soo Gabogabeeyay Iyo Go'aanka Maxkamada Oo La Shaaciyay + Maxay Xukuntay Maxkamadu?
22/05/2019(BNN) Xeerbeegti Maraykan ah ayaa heshay in uu dambi gaystay nin Soomaali ah oo taxi kaga shaqaysan jiray gobolka Virginia ee dalka Maraykank, isaga oo jirdil gaystay intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya qaybihii dambe ee siddeetameeyadii.
Talaadadii xeerbeegti ka tirsan maxkamadda faderaalka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ee dalka Maraykanka ayaa Yuusuf ku heshay in uu masuul ka ahaa jirdilkii loo gaystay Farxaan muddo haatan laga joogo in kabadan soddon sano, waxayna u xukuntay 500,000 oo doolar oo magdhaw ah
Farxaan oo dacwaddan markii u horraysay ku soo oogay Yuusuf sannadkii 2014kii ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamadda.
"Aad iyo aad baan ugu farxay go'aanka maxkamadda," Ayuu yidhi Farxaan.
Bilihii ka dambeeyayna wuxuu sheegay in su'aalo la waydiin jiray, la jidh dili jiray, la garaaci jiray isla markaasna xabbad lagu dhuftay iyadoo awaamiirta uu bixinayay kornayl Yuusuf oo guuto xukumay.
Mayd ahaan ayaa la iiga tagay ayuu yidhi Farxaan, wuxuuna sheegay in uu lacago siiyay dadkii aasi lahaaa si ay mayd kale booskiisa ugu badalaan.
Wasaaradda amniga gudaha oon la xidhiidhnay jawaab degdeg ah kama bixin arrintaas.